BBC Burmese - အစီအစဉ်များ - ဘာသာပြန်ခြင်း
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန်9ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010 - 20:49 GMT
ဘာသာပြန်ပုံအကြောင်း ဘီဘီစီမြန်မာဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေရှင်းလင်းချက်
မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘာသာစကားကို မြန်မာလို ပြန်တဲ့အခါမှာ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးကို ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာက မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတာကို ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
မိမိတင်ပြတဲ့ စာနဲ့စကားတို့ ပြေပြစ်ရှင်းလင်းဖို့ အဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်ဖို့ ဘာသာစကားဂုဏ်ရည်နဲ့လည်းပြည့်စုံပြီး သဒ္ဒါသဘောကို နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ အချိန်ကိုလုပြီး ဘာသာပြန်ရတဲ့ အခါတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အပြောစကားပြေနဲ့ အရေးစကားပြေနှစ်မျိုး ရောနှော ရေးသားမိတာမျိုးတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ဝါကျ၊ ဖောင်းပွတဲ့ဝါကျ အဓိပ္ပာယ်တူညီနီးစပ်တဲ့ စကားတွေ ပါဝင်တဲ့ဝါကျတွေ အသုံးပြုမိတဲ့အခါတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
မိမိဆိုလိုချက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်အောင်လို့ ဝါကျတိုတိုရေးပါ။ မလွှဲမရှောင်သာလို့ ဝါကျရှည်ရှည်ရေးရတဲ့အခါ ပုဒ်အထားအသို အဆက်အစပ်ကို အထူးဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်။
ဘာသာပြန်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံခြားစကားအသုံးအနှုန်း၊ စာပိုဒ်၊ ဒါမှမဟုတ် စကားလုံး မငြိမ်သေးလို့ မြန်မာစကားပြေအရ မလုံလောက်နိုင်တဲ့ စကားမျိုးကလွဲရင် နိုင်ငံခြားစာပိုဒ်တွေ မသုံးမိအောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
Reference: Dictionary of International Relations by Graham Evans and Jeffrey Newnham
‌ARMS RACE= Literallyacompetitive building up armaments by at least two actors in conflict Proposed Burmese term = လက်နက်အင်အားယှဉ်ပြိုင်စုဆောင်းမှု
CIVIL SOCIETY = The set of intermediate associations which are neither the state nor the (extended) family; civil society therefore includes voluntary associations and firms and other corporate bodies (The Concise Oxford Dictionary of Politics) Proposed Burmese term = လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်း
CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT = Term used to describe US policy towards Southern Africa from 1980 onwards. The term was coined by Chester Crocker, assistant secretary of state for African affairs, and refers to US attempts to reform the South African system by working within it and honouring its rules. A form of ‘quiet’ diplomacy which seeks to encourage White-led change in the region. Proposed Burmese term = အပြုသဘော ဆက်ဆံဆွေးနွေးမှု
DOMESTIC JURISDICTION = A logical consequence of sovereignty wherebyastate rules supreme within its own territorial frontiers Proposed Burmese term = ပြည်တွင်းစီရင်ပိုင်ခွင့်
ECONOMIC SANCTIONS = A form of economic statecraft which involves the use of economic capability by an actor or group of actors (the Imposer) inadeliberately coercive manner to pursue certain policy goals Proposed Burmese term = စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ရေးယူမှု
ETHNIC CLEANSING = A modern euphemism for the systematic, deliberate and often brutal forced removal of members of one or more ethnic groups from territory claimed by another ethnic group Proposed Burmese term = မျိုးခြားလူမျိုးစု သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု
FREEDOM OF INFORMATION = The free access of the public to information contained in government records (The Concise Oxford Dictionary of Politics edited by Iain McLean and Alistaire McMillan Proposed Burmese term = လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူပိုင်ခွင့်
GLOBALIZATION = The process whereby state-centric agencies and terms of reference are dissolved in favour ofastructure of relations between different actors operating inacontext which is truly global rather than merely international Proposed Burmese term = ကမ္ဘာလွှမ်းပတ် ယှက်နွှယ်မှု
HUMANITARIAN ASSISTANCE = Traditionally associated with acts of assistance undertaken by states in response to natural disasters ofatemporary kind: that is earthquakes, floods, fires, famines and so on Proposed Burmese Term = လူသားဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီ
HUMANITARIAN INTERVENTION = Entry intoacountry of the armed forces of another country or international organization with the aim of protecting citizens from persecution or the violation of human rights The Concise Oxford Dictionary of Politics edited by Iain McLean and Alistaire McMillan Proposed Burmese term = လူ့အခွင့်အရေး အတွက်ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်း
အမေရိကန်အရေးယူမှု ကို မြန်မာ အစိုးရ တုံ့ပြန်
မြန်မာကုမ္ပဏီတချို့ ကို အမေရိကန်အရေးယူမှု အပေါ် အစိုးရ တုံ့ပြန်
အမေရိကန် ငွေတိုက်စာချုပ် ထုတ်ရောင်းမှု လျော့မယ်
အများအတွက် အသက်စတေးခဲ့တဲ့ အီရတ် ရဲကို ဂုဏ်ပြု
ဘီဘီစီ သတင်းပညာကောလိပ်ဘီဘီစီ သတင်းပညာ ကောလိပ်မျှမျှတတ သဘောထား အမြင်မြန်မာအင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က နိုင်ငံခြားစကား အသုံးအနှုန်းအသံထွက် မှန်ကန်ဖို့လိုသတင်းထောက်တွေ သတင်းရေးပုံ ရေးနည်းဘာသာပြန်ခြင်းစာကိုနားနဲ့ဖတ်ပါ